सर्वाधिक धेरै कमाउने अभिनेताको छैटौं सूचीमा बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार – Khabarbot
सर्वाधिक धेरै कमाउने अभिनेताको छैटौं सूचीमा बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार
न्युयोर्क, साउन ३० । हलिउड अभिनेता तथा रेस्लर डायन जोनसन ९द रक० लगातार दोस्रो वर्ष सर्वाधिक कमाइ गर्ने अभिनेताको सूचीमा पर्न सफल भएका छन् । विश्व चर्चित पत्रिका फोब्र्समा प्रकाशित समाचारमा सन् २०१९ को जुन १ देखि सन् २०२० को जुन १ सम्मको अवधिमा ८७।५ मिलियन अमेरिकी डलर कमाइसहित उनी सूचीको पहिलो नम्बरमा पर्न सफल भएका हुन् ।
यसमा नेटफ्लिक्सको थ्रिलर सिनेमा ‘रेड नोटिस’ का लागि लिएको २३।५ मिलियन अमेरिकी डलर पारिश्रमिक समेत समावेश रहेको जनाइएको छ । यस्तै उनले आफ्नो फिटनेस लुगाको ‘प्रोजेक्ट रक’ ब्रान्डबाट समेत राम्रो कमाइ गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।सौय दैनिकमा खबर छ ।
यसैगरी अभिनेता जोन्सनपछि सर्वाधिक धेरै कमाउने अभिनेताको सूचीमा ‘रेड नोटिस’ मा उनीसँगै काम गरेका अभिनेता रायन रेनल्ड्स रहेका छन् । उनले ७१।५ मिलियन अमेरिकी डलर कमाएको समाचारमा जनाइएको छ । सूचीको तेस्रो स्थानमा अभिनेता तथा निर्माता मार्क वाहबर्ग छन् ।
उनको कमाइ ५८ मिलियन डलर रहेको छ । चौथो सूचीमा बेन एफ्लेक छन् भने पाँचौमा भिन डिजेल छन् । सूचीको छैटौं स्थानमा बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको नाम रहेको छ । उनले ४८।५ मिलियन अमेरिकी डलर कमाएको फोब्र्स पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । अक्षयको कमाइको अधिकांश हिस्सा विज्ञापनमार्फत आएको हो ।
उनीहरूसँगै धेरै कमाउने अभिनेताको सूचीमा लिन–मानुयल मिरान्डा, विल स्मिथ, एडम सान्डलर र ज्याकी च्यान लगायतका कलाकार रहेका छन् । त्यस्तै, अभिनेत्रीको सूची भने सार्वजनिक गरिएको छैन । गत वर्ष अभिनेत्रीतर्फ भने ५६ मिलियन अमेरिकी डलर कमाइसहित स्कारलेट जोनसन सूचीको पहिलो नम्बरमा पर्न सफल भएकी थिइन् ।
‘स्वप्निल रङ्गमा रङ्गेकी तिमी’मा उकुसा र अपिलको गज्जब अभिनय
दिनमा हराउछौं, रातमा हुन्छ र माया ? थर पो सोध्छेउ त जातमा हुुन्छर माया ? प्रकाश सपुतको भाईरल सायरी (भिडियो)
आमाजूले बुहारीलाई फिल्मी शैलीमा गा’यब पारिन्,भेट्नेबित्तिकै पर्‍यो हा’ना’हा’न( भिडियो हेर्नुहोस्)
पाथिभरा माताको दर्शन गरेर आज बिहिबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
भारत सरकारको तर्फबाट बाढीपहिरो प्रभावित परिवारहरुका लागि राहत सामाग्री सहयोग
मैले पाइदिने काम हो,पाइदिएँ,जसले जे सुकै भनोस् मलाई छोराहरूको माया लाग्दैन(भिडियो हेर्नुहोस्)
दिउसो बुबाले भेटेर गएको छोरी साझ साथीले हेर्दा…..